ဆော့ဝဲ လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက် - အပိုင်း 2
1 ဒေတာဘေ့စ်၏ဖိုင်တွဲကို "1 ဒေတာဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအမှား" အကြောင်းအရင်းကအကူအညီကိုမဖွင့်ပေးပါ
1 ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်တွဲကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှု။ မဖွင့်ခြင်း၊ အကူအညီ၊ အထောက်အကူ၊ ဤအမှားပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊
Excel မှ Word သို့ဇယားတစ်ခုကိုကူးယူနည်း။
Excel မှ Word သို့ဇယားတစ်ခုကိုကူးယူနည်း။ file မှလမ်းကြောင်း paste-the object-түзүү - ဖိုင်လမ်းကြောင်းသို့ယေဘုယျအားဖြင့်စခရင်ရိုက်ယူပြီးဂရပ်ဖစ်ပုံကိုကူးထည့်ပါ၊ သင် clipboard မှတစ်ဆင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာများရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ် pdf ဖိုင်ကို 2007 Word တွင်ကြည့်ချင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်သေးပါ။ အကူအညီ
ငါသေချာပေါက် pNN ဖိုင်ကို 2007 နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တွေ့ချင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်သေးပါ။ AdobeReader ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်အဆင်မပြေတော့ပါ။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ... ဒါပေမယ့်ဆိုရင် ...
32 x bit နှင့် 64 ဆိုသည်မှာဘာလဲ
32-x နှင့် 64 32-bit နှင့် 64-bit ဤနံပါတ်များသည် bit၊ processor ဗိသုကာမဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်ကိုရှင်းပြပါ၊ သူတို့၏အဓိကခြားနားချက်မှာကြီးမားသောပမာဏနှင့်အတူ bit capacity ပိုမိုကြီးမားသည်။
“ လျင်မြန်စွာသိုလှောင်နိုင်သောနည်းပညာ” ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ
“ လျင်မြန်စွာသိုလှောင်နိုင်သောနည်းပညာ” ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ http://www.intel.com/support/en/chipsets/imsm/sb/cs-020784.htm BIOS ကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ။ - ထိုအတိုချုပ်လျှင်။ ။ Intel Rapid Recover နည်းပညာ ...
အဘယ်အရာ image file ကိုအတူလုပ်ဖို့? ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအားလုံးင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အဘယ်အရာ image file ကိုအတူလုပ်ဖို့? ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအားလုံးင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! daemons tools တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်, ငါကိုမှန်ကန်စွာနားလည်လိုလျှင်သင်ကရိုးရှင်းတဲ့ Archiver ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ညာဘက် ...
.key ဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သနည်း။ .key သည် registry file တစ်ခုဖြစ်သည်။ 100% Kaspersky ကိုထည့်သွင်းချင်တယ်။ 🙂မင်းက Kaspersky ကိုသွားပြီး၊ "ငါရှိပြီးသား ... "
ဘယ်လို swap ဖိုင်ကို RAM ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ comp-properties-additionally-speed-ထို့အပြင် virtual memory မပါ ၀ င်သော error message များအနေဖြင့် RAM ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ် paging ဖိုင်အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရမည်။ ဝင်းဒိုး ...
Word မှာစာသားဘယ်လိုရေးမလဲ၊ ရွေးစရာတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသင့်ပြီးဂုဏ်ပြုလွှာများရေးသားခြင်း (သို့) သင်လိုအပ်သည်များကိုရေးသားသင့်သည်။
HP Assistant Help ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ကွန်ပျူတာဆိုးဆိုးရွားရွားဘရိတ်။ အစီအစဉ်များ၏ဖယ်ရှားရေးမှတဆင့်
HP Assistant Help ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ကွန်ပျူတာဆိုးဆိုးရွားရွားဘရိတ်။ ပရိုဂရမ်ကို uninstall လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ HP Support ကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားမထားလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ သို့ဆိုလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ C / Windows / HP Support Assistant.msi ဤနေရာတွင် ...
Ubuntu ကဘာလဲ၊ ဘာစားလဲဆိုတာနဲ့
Ubuntu ကဘာလဲ၊ ဘာကိုစားသလဲ။ ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာအတွက်ဒုတိယ OS အဖြစ် WUBI ubuntu 10.10 ထည့်သွင်းသူကိုစမ်းစစ်ရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ၀ င်းဒိုးအတွက်အသုံးချမှုတစ်ခုတီထွင်ခဲ့သည် ...
KMPlayer amr ဖိုင်ကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်းဒီပုံစံကိုကစားနိုင်သည့်အအေးဆုံးကစားသမားမှာ Jetaudio ကစားသမားဖြစ်ပြီးအရိုးရှင်းဆုံးနှင့်စိတ်အချရဆုံးမှာ VLC Player သို့မဟုတ် SMPlayer Apple QuickTime Player * ...
Windows authentication ကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ။
Windows authentication ကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ။ http://wgapatcher.ru/index.php အလိုအလျောက်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပိတ်ပါ။ ဤပြသနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည် (WgaTray.exe နှင့် WgaLogon.dll အမည်ပြောင်း / ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မှုအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းခြင်း), သို့သော် ...
System Control Manager အသုံးအဆောင်သည်အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
System Control Manager အသုံးအဆောင်သည်အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောပြproblemနာရှိခဲ့သည်၊ mwfix Control Manager Control Manager ကိုသုံးပါ Trend Micro Control Manager - ဤ ...
Mac OS X ဆိုတာဘာလဲ။
Mac OS X ဆိုတာဘာလဲ။ http://www.apple.com/en/macosx/ http://www.apple.com/en/macosx/what-is-macosx/ ၎င်းသည်သင့်အတွက်မလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်၊ သံ၊ ဤ OS သည်ပံ့ပိုးမှုအားလုံးနှင့်ဝေးသည်။ ပထမ ဦး စွာသင် Mac ကွန်ပြူတာတစ်လုံးဝယ်ရန်လိုအပ်သည်။ Apple ကွန်ပျူတာများအတွက်လည်ပတ်မှုစနစ်။ 10 ...
ဗွီဒီယိုကို Opera မှမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။ အော်ပရာ: cache သို့မဟုတ် opera ရိုက်ထည့်ပါ။ address bar တွင်ထိုနေရာတွင် cache ဖိုင်များသိမ်းထားသောနေရာကိုတွေ့လိမ့်မည် (cache ဟူသောစကားလုံးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်) ။ ဗွီဒီယို - များသောအားဖြင့်အကြီးဆုံးဖိုင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည် ...
DVD မှ MKV သို့ converter တစ်ခုလိုအပ်တယ်။
DVD မှ MKV သို့ converter တစ်ခုလိုအပ်တယ်။ ရုရှား Format Factori ဗားရှင်း 2.10 http://files.mail.ru/UB96SL အမျိုးမျိုးသောမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များအတွက်ဘက်စုံသုံးပြောင်းစက် FormatFactory ကို universal tool တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသောအပိုဆောင်း features များစွာရှိသည်။
Windows 10 တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်နည်း။
Windows 10 တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်နည်း။ ထိုပြPROနာကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် KALAKYA ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးရည်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းစုစုပေါင်း BALMONITORP ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
windose 8.1 အပေါ် BIOS ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
၀ င်းဒိုး 8.1 တွင် BIOS ၀ င်ရောက်ရန် http://remontka.pro/zaiti-bios-windows-8/ တွင်လေ့လာရန် BIOS သည် OS နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ လက်တော့ပ်တွေမှာ F2၊ များသောအားဖြင့် FXNUMX၊
: D windows10 မှအီးနှင့်အတူဒေသခံ disk ကို pereimenovt အဖြစ်
ဒေသမှ drive တစ်ခုအား E မှ D windows10 သို့မည်သို့အမည်ပြောင်းမည်နည်းကျွန်ုပ်သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားသည်ဟုမထင်ပါ။ ကွန်ပျူတာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ disk စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မှာ Acronis Disk ညွှန်ကြားရေးမှူး ...
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ 72 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,535 စက္ကန့်ကျော် Generate ။